Nhau - Nei vanhu vazhinji uye vazhinji vachisarudza ecological musuwo？
Nei vanhu vazhinji uye vazhinji vachisarudza ecological musuwo？
Musuwo hausi chete rudzi rwekushongedza kwenzvimbo, asiwo mutariri wenzvimbo yega yega yakazvimiririra. Makanaka, akanyarara, akachengeteka uye mamwe mabasa akakosha, asi "yakasimba" iri nyore kuregeredzwa nevashandisi vekutanga.
Nekuti zvigadzirwa zvisina kusimba hazvizoburitse pachena matambudziko mazhinji mushure mekutanga kuisirwa. Pamwe mushure memakore matatu kana mashanu, deformation, kutsemuka uye mamwe matambudziko anoonekwa akateedzana. Panguva ino, vashandisi vazhinji vakatanga kudemba yavo yega ruzhinji psychology, uye mune yechipiri kushongedzwa, kusimba kwezvigadzirwa ndiko kuchave kwakanyanya kukoshesa.
Kazhinji kutaura, iyo nguva yehupenyu yekushongedzwa kwemba ingangoita makore gumi, uye hupenyu hwese hwebasa remusuo wezvakatipfuura unopfuura makore makumi maviri, uye hupenyu hwebasa revhavha yemusuwo ndeye yakakwira kana anopfuura makore makumi mashanu. Nekudaro, pamberi peinotevera kushongedzwa kwese, hakuzovi nemamiriro ezvinhu sekuti "hapana chinotsiva, chakanyanya kuoma kuisa".
Nei gonhi rezvakatipoteredza rakagwinya kudaro? Kutora Mujiang yepamusoro-kumagumo ecological musuwo semuenzaniso, iyo keel inotora yechishanu chizvarwa titanium magnesium aluminium alloy, ine ukobvu hwe1.5mm. Uye iyo yekutanga aruminiyamu zvinhu iyo ine simba rakakura, ndicho chakanakisa chigadzirwa chemuzuva rino remusuwo wemukati memba, inova isina mvura, hunyoro-chiratidzo, anti kutsemura, anti-ngura, anti-ngura, anti kukanganisa, isina deformation uye hupenyu hwakareba hupenyu.
Zvakare, Mujiang yekumusoro-kumagumo ecological musuwo inokodzera kune yakazara chiitiko chiitiko chekushandisa pamba. Semuenzaniso, musuwo wekicheni munzvimbo yakanyorovera kazhinji inzvimbo inorambidzwa yemiti yemiti yemiti. Nekudaro, izvo zvecological musuwo zvemvura isina mvura uye hunyoro-humbowo hunogona kugadzirisa dambudziko iri uye zvinokodzera nharaunda yehukama hwehukama hwehukama senge kicheni uye imba yekuzorora.
Pamusoro pezvakanaka zviviri zvekugara uye kushandiswa kwakawanda, Mujiang gonhi remuti rine zvimwe zvakanaka.
Iyo yekumusoro-kumagumo ecological gonhi wedanda reMuangang yemusuwo wedanda inosanganisira huni, jira, dombo, rakasimba ruvara uye mimwe mhedzisiro. Iyo dhizaini inoverengeka uye yakapusa, yemufashoni uye ine rupo, iyo inogona zvirinani kusangana nezvinodiwa zvechizvarwa chitsva chemashure-makumi mapfumbamwe evatengi pane icho chigadzirwa chitarisiko.
Panyaya yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, izvo zvakakosha zvinhu zveMuangang gonhi remapuranga titanium magnesium aluminium alloy, antibacterial uye isingatsvi moto inoumbwa nemazhinji multilayer board, anti Beite antibacterial board, ecological pendi yemahara yekupfeka-inodzivirira ndiro, isina formaldehyde uye inorema simbi, uye inosvika chiyero chekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza cheE1.
Kana iwe uchingoda kuziva zvigadzirwa zvechikwata, ndapota uya kuMuangang yepamusoro-kumagumo ecological musuwo kuti uenzanise. Ini ndinotenda iwe uchasarudza iri nani Mujiang yepamusoro-kumagumo ecological musuwo nefashoni yakawanda, yakasimba uye yakawanda kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza semhuri zhinji!
Post nguva: Nov-13-2020
Kuchengetedza hunyanzvi hwemusuwo wedanda uye atte ...
Nei vanhu vazhinji uye vazhinji vachisarudza ecologica ...
Vatengi Services: 18931163337